Injabulo kwizaguga zivakashela umkhandlu zingazelele – Sivubela intuthuko Newspaper
IMeya yomkhandlu wakwaMaphumulo ukhansela Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini
Injabulo beyibhalwe ebusweni kwizaguga ezakhele uMasipala wakwa Maphumulo ngesikhathi kutheleka ithimba eliholwa uMeya uKhansela Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini.
Njengengxenye yemigubho yenyanga ka Mandela, uMasipala wakwa Maphumulo uhambele zonke izakhamuzi zakwa Maphumulo ezineminyaka eyevile ekhulwini. IMeya yomkhandlu u Khansela Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini ubehambela zonke izakhamuzi ezindala, ufike wanikela ngezindodla zokudla kanye nezingubo zokulala.
Inhloso ngalolu chungechunge bekungukugubha iqhaza elibanjwe abantu abadala ekwakheni umphakathi osimeme. U Khuzwayo-Dlamini uthe abantu abadala baseduze nenhliziyo yakhe.
“Kuyasijabulisa ukuthi sakhele umphakathi onabantu abaningi abaneminyaka eyevile kweyikhulu, siyalijabulela iqhaza abalibambile ekwakheni imiphakathi yethu, abantu abaningi esibahambele bacishe balingane nowayengu Mongameli u Nelson Mandela, ingakho sikubone kufanele
ukuthi sijabulise abantu abadala njengengxenye yemigubho ye Mandela month, ” kusho u Khuzwayo-Dlamini.
Lolu chungechunge luqale mhlaka 21 ku Ntulikazi 2020 lwaze lwaphela mhlaka 23 ku Ntulikazi 2020. Phakathi kwabantu abebehamba nethimba lika Meya, uSekela Meya uKhansela u Zama Ncalane, uSomlomo uKhansela Simphiwe Shange kanye namakhansela amawadi akhele uMasipala wakwa Maphumulo.
Izakhamuzi zisishayele ihlombe isenzo sika Meya sokukhumbula abantu abadala ngesikhathi esinzima, lapho abantu bebhekene nendlala ngenxa yokubhebhetheka kwegciwane i Covid-19.
UMnuz Cebo Zulu uncome igalelo lika Masipala ngokunakekela abantu abadala.
“Muhle kakhulu umsebenzi owenziwe uMasipala wakwa Maphumulo ngokulula isandla kubantu asebekhulile, sibuyelwa ithemba lokuthi kuningi okuhle esisazokuhlomula ngaphansi kobuholi obukhona,” kusho u Zulu.
Izaguga nazo azisalanga ngaphandle zibonga zinconcoza ngokukhunjulwa yithimba lika Meya. Ugogo umaNcwane Ntuli uthe inhliziyo yakhe iyagxumagxuma yinjabulo ngakwenzelwe uMasipala.
“Ngiphelelwe amazwi okubonga umusa ka Masipala ngokusikhumbula nathi uma ugubha impilo yeqhawe elasikhulula ekugcindezelweni, ngiyabonga kakhulu ngakho konke okuhle lo Masipala osenzela khona,” kuphetha ugogo u Ntuli.
Izinhlangano ebeziyingxenye umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kanye ne South African Social Security Agency (SASSA).